Singabenzi beemveliso zekhabhoni zekhabhoni ze-10 iminyaka.
Weihai Snowwing Outdoor Equipment Co., Ltd. isekwe ngo-2010 kwaye ibekwe kwisixeko esihle sonxweme---Weihai, kwiPhondo laseShandong.
Isixeko sethu sidume ngentonga yokuloba ngoko ke izinto zethu zekhabhoni zivuthiwe kwaye zisemgangathweni olungileyo ngexabiso elikhuphisanayo, sisasondele eJapan naseKorea, ke malunga ne-carbon fiber kunye ne-tech sinxibelelana kakuhle nezabo, kwaye senza umgangatho ongcono kunabanye.
Sinazo izixhobo zokuvelisa ezikumgangatho ophezulu kunye nobuchule obuchwephesha. Iqela lethu lolawulo kunye neengcali zineminyaka emininzi yamava kule fayile ngokufaka ulawulo lwale mihla lwekhompyuter kunye nesixhobo sovavanyo lwetekhnoloji ephezulu.
sinokuvelisa ityhubhu ye-carbon fiber kubandakanywa ityhubhu yeteleskopu, i-tripod yekhamera, isithuthuthu kunye ne-automobile vent-pipe kunye nokunye), ipleyiti ye-carbon fiber (inokucutshungulwa yi-CNC yokusika ukwenza imveliso yokugqibela oyifunayo) kunye ne-carbon fiber 3D iindawo ezimile (auto kunye inkqubo yokukhupha isithuthuthu, iinxalenye kunye nezixhobo zemidlalo inxalenye).
Inkampani ithatha iimveliso ezikumgangatho oPhezulu, uMthengi kuqala, inkonzo yomgangatho wokuQala kunye nemigaqo yokuziphatha enyanisekileyo kubathengi esibaziyo ukuba UMGANGATHO NGUMPHEFUMLO WESHISHINI !ngoko siyanyanzelela ukubambelela kolu tshintsho. kwaye sizame ukubonelela ngezona mveliso zikumgangatho ophezulu kubathengi abavela kwihlabathi liphela, Siyakwamkela ngokufudumeleyo ukuba usebenze nathi, masibe ngamahlakani kwaye sizuze impumelelo ephindwe kabini phakathi kwakho nathi!
Sinesebe elahlukileyo leemveliso ze-carbon fiber, ezifana: nemveliso ye-R&D DEP, iqela lentengiso yezizwe ngezizwe, iqela le-QC, kunye neqela loYilo kunye nenjineli ye-carbon fiber, kunye neshiti ye-carbon fiber kunye neshishini lepolekophu kunye nathi siya kukuzisa amava okusebenza angcono kuwe.
ULAWULO LOMGANGATHO OLUQINISEKILEYO
Sinyanzelisa umgangatho ngumphefumlo weshishini, ngoko ke sinolawulo olungqongqo lomgangatho we-carbon fiber sheet sheet kunye nezinye iimveliso zenkampani, isiqinisekiso esingqongqo, ukuhlolwa komgangatho ongqongqo, ukupakisha okungqongqo, yonke inkalo singqongqo kuphela oku sinokubaleka ixesha elide kwaye ngonaphakade
SONQOLOLA IINGXAKI ZAKHO
I-carbon fiber tube sheet yethu ye-telescopic pole kunye ne-carbon cues shaft ingenanto, sinobungakanani obuninzi bokuzikhethela, kodwa ukuba akukho mfuneko, pls ungakhathazeki, sineemveliso zethu zekhabhoni injineli enokukunceda ukuyisombulula, ungasixelela ngokusetyenziswa kwakho. kwaye wabelane ngolwazi lwakho oluthe kratya malunga neemveliso zekhabhoni zefayibha ozifunayo, injineli yethu iya kukhetha ilaphu lekhabhoni yefayibha eyahlukileyo kunye netekhnoloji eqengqelekayo okanye enye inkqubela phambili yokuhlangabezana neemfuno zakho.
Umbhobho weCarbon Fiber, I-Carbon Fiber Rod, Icwecwe leCarbon, I-Carbon Fiber Cue Shaft, ICarbon Fiber Telescopic Tube, ICarbon Fiber Square Tube,